Izinti ezine ezikhishwe u-Simmonds zibeka i-SA Emerging ngaphambili
u-Kyle Simmonds ukhiphe izinti ezine njengoba i-South Africa Emerging iqinisele isibambo sayo bedlala ne-Sri Lanka phakathi nomdlalo wokuqala wezinsuku ezine e-Potchefstroom ngoLwesihlanu.
Lomdlali oyi-slow left-armer ukhiphe izinti ezine ngama-runs awu-88 kuma-overs awu-19 e-Senwes Park lapho izivakashi zivale usuku lwesibili no-230 kuphume abadlali abayisishagalolunye, liphendula u-382 oshaywe iqembu lasekhaya kuphume bonke abadlali.
Lokhu kunike iqembu la-Shukri Conrad ukuba ngaphambili ngama-runs awu-152 futhi bazobe bebheke ukugcina bengaphambili ngokuqeda nge-innings yeqembu abadlala nalo ngokushesha osukwini lwesithathu.
Njengoba u-Simmonds eqhakazile ngebhola, bakhona abadlale indima kulaba abadlala phakathi nendawo kanye nasemsileni ekuqaleni kosuku okusize kubathwale besuka ku-281 kuphume abathathu kwafika ku-382 bephume bonke.
u-Sibonelo Makhanya wenze u-22, walandelwa u-Sinethemba Qeshile no-20 kanye no-Dayyaan Galiem uhlanganise u-28, okuvumele ama-South Africans anezezele ngo-101 kuphume izinti zokugcina eziyisikhombisa. u-Lasith Embuldeniya ushwibe kahle wakhipha izinti ezinthathu ngama-runs awu-116.
Iqembu lasekhaya livule ukushwiba nge-spin sika-Simmonds futhi lokho kubukeke kumangaza izivakashi njengoba ekhiphe u-Minod Bhanuka ngebhola lokuqala. u-Pathum Nissanka (7) ukhishwe u-Tladi Bokako (1/24), okushiye i-Sri Lanka enkingeni nama-runs ayisikhombisa kuphume abadlali ababili, ngaphambi kokuthi ukapteni u-Charith Asalanka wazama ukukhuphula i-innings ngokuthola u-56 (84 balls, 6 fours, 2 sixes) ukuzama ukulwa.
Wenze inhlanganiso yama-runs awu-82 no-Hasitha Boyagoda (40), kwathi u-Chamika Karunaratne (27) no-Kamindu Mendis (33), kanye no-Nishan Peiris (46 not out), bancozule umphumela wama-South African. Empeleni u-Peiris ongakhishwanga no-Mohamed Shirza (7) bahlanganise u-45 ngenti yesi-10 ngasekupheleni kosuku ukushiya iqembu lasekhaya licikekile.
Ngaphambi kwalokho, u-Nandre Burger (2/47) no-Marco Jansen (2/32) bebekhiphe izinti ezimbili umuntu emunye ukwenza izinto zibhede kakhulu kwi-Sri Lanka.
SA Emerging squad: Tony de Zorzi (Multiply Titans), Janneman Malan (World Sports Betting Cape Cobras), Raynard van Tonder (VKB Knights), Matthew Breetzke (Warriors), Wandile Makwetu (VKB Knights), Sinethemba Qeshile (Warriors), Sibonelo Makhanya (Hollywoodbets Dolphins), Marco Jansen (VKB Knights), Tshepang Dithole (bizhub Highveld Lions), Tshepo Ndwandwa (World Sports Betting Cape Cobras), Tladi Bokako (World Sports Betting Cape Cobras), Nandre Burger (World Sports Betting Cape Cobras), Kyle Simmonds (Northerns), Jason Smith (World Sports Betting Cape Cobras), Dayyaan Galiem (Multiply Titans), Thando Ntini (World Sports Betting Cape Cobras)
i-USSA izodlala ne-Sri Lanka kwi-final ye-Emerging Series Abanelanga ubuqhawe kwa-Jansen ukunqobisa i-SA Emerging i-All-rounder u-Simmonds usize i-SA Emerging inqobe okokuqala idlala ne-Sri Lanka i-Pakistan ingaphambili kwi-series idlala ne-SA U19s Ukukholelwa endleleni okwenziwa ngayo, kusho u-Mahatlane i-Pakistan ingaphambili ngo-3-0 nokho u-Terblanche ethole ikhulu kwi-Youth ODI yesithathu u-Louw ufuna ama-SA U19s agxile kumoya weqembu kanye nezenzo kumdlalo wesithathu we-Youth ODI u-Khan no-Nazir beshaya babeka i-Pakistan ngaphambili ngo-2-0 kwi-Youth ODI series i-CSA imemezele imidlalo ye-SA U19s ngaphambi kwe-World Cup bedlala ne-India, i-Zimbabwe ne-New Zealand uParsons uzimisele ngokuhola njengesibonelo kuhambo lasekhaya bedlala ne-Pakistan i-CSA iluvumile uhambo lasekhaya ne-Pakistan, baqamba neqembu